Famafàna data avy amin'ny vokatry ny Google - Semalt Expert
Maro ireo webmasters, programmers, ary mpandrindra no manaparitaka Google. Mamolavola ireo pejy web ilaina sy mandefa data any amin'ny format CSV sy JSON. Maro fitaovana fanariam-pako no nampidirina tao anatin'ny volana vitsivitsy, fa ireo malaza indrindra no voalaza etsy ambany - doccino che perde.
Tolotra tena ilaina hanalàna ny rohy Google an'arivony ao anatin'ny folo minitra monja. Miaraka amin'ny Import. io, afaka mamorona ny angona manokana sy ny angon-drakitra any amin'ny CSV sy JSON ianao. Ity fitaovana ity dia tsy mila manoratra code iray ary manana API 1000+ hanatanteraka ny asany. Mahafantatra tsara ny teknolojia fianarana milina izy ary mamoaka data araka ny fanirianao. Ity fampiharana maimaimpoana ity dia misy amin'ny Mac OS X, Windows sy Linux mpampiasa. Import. Io dia tsy tranokala ihany , fa koa ny mpitrandraka sy ny mpiloka.
miaraka amin'ny Webhose. io, afaka miditra mivantana avy hatrany ny angon-drakitra amin'ny fotoana mety ianao ary mikaroka rohy Google an'arivony ao anatin'ny minitra vitsy. Ny webhose dia tena fantatra amin'ny teknolojia fianarana maoderina ary afaka manova ny angon-tsainao amin'ny fiteny 120 mahery. Ankoatra izany, dia mamonjy ny valiny amin'ny endrika tahaka ny JSON, RSS ary XML. , Mampiasa ny Webhose ny programera sy ny mpandraharaha. io mba hikorontana ny fampahalalam-baovao isan-karazany sy ny vavahadin-tserasera ary handefa mivantana ireo angona mivantana amin'ny fiara sarotra.
CloudScrape, fantatra ihany koa amin'ny Dexi. io, dia serivisy manonta ampiasaina amin'ny famonoana Google ao anatin'ny minitra vitsy. Azo atao ho an'ny orinasa izy io ary mikarokaroka tranokala maoderina. Mampiasa ity serivisy ity ny Spammers mba handikana ny votoatin'ny tranonkala isan-karazany. Izy io dia manome tonian-dahatsoratra mpamorona ary mampiasa bots mba hikirakira ny tranonkalanao ary manaisotra ny vaovao amin'ny tena izy. Azonao atao ny mamonjy mora foana ny angon-drakitra ao amin'ny Google Drive na Box. net na entana toy ny JSON sy ny CSV.
Raha mikasa hanaparitaka rohy Google ianao ao anatin'ny dimy ka hatramin'ny folo minitra, ny Scrapinghub no fitaovana mety aminao. Hafatry ny rakitra sy ny rakitra momba ny harena an-kibon'ny tany miaraka amin'ny karazana sy ny karazan-javatra maro. Ny Scrapinghub dia ampiasain'ireo hackers mba haka ny votoatin'ny tranonkala manan-danja ary manana fikandrana proxy proxy mba hahazoana ny asa vita tsara.
Amin'ny Visual Scraper, azonao atao ny mametraka mora sy mikarokarena mihoatra ny roa arivo amin'ny rohy Google ao anatin'ny segondra. Io no iray amin'ireo fomba mahatalanjona indrindra sy nalaza nalaina tao amin'ny tranonkala ary fandaharam-pizarana data. Ny data dia azo amidy any amin'ny format toy ny SQL, JSON, XML, ary CSV. Azonao atao ny manangona, manara-maso ary mamoaka ny votoaty ao anaty tranonkala miaraka amin'ny interface-teboka tsotra. Mba hiantohana ny fiarovana ny mpampiasa azy, Google dia nametraka tetikady maromaro ary mangataka anao hampiditra ny captcha amin'ny fomba tsy tapaka. Midika izany raha mandefa fangatahana roapolo amin'ny milina fikarohana ianao, ny sasany amin'izy ireo dia hesorina avy hatrany raha tsy ampidirina ny kapila. Google dia mikendry ny hisoroka ny mpisera tsy hanaparitaka ny raki-tsoratry ny fikarohana, fa ireo fitaovana voalaza etsy ambony ireo dia ampiasaina betsaka mba hanangonana ireo angona avy amin'ny tranokala sy bilaogy.